Le nkonzo online free. Ukubalwa ngezinyuko metal yintsimbi egosogoso wesaphetha
Ukubalwa kwizinyuko yentsimbi wesaphetha gosogoso
Ukubalwa izinyuko ngqo egoso wesaphetha metal
Ukubalwa ngezinyuko metal wesaphetha uyilo kunye egosogoso.
Ukufumanisa Inani lemibhobho Iprofayili ngenxa umtya.
I-engile ukutyekela kwizinyuko.
Indawo ngamanqanaba izinto.
Iingcebiso kuba ezinyukweni bekhululekile.